ကျောင်းသင်ရိုးသစ်ပေါ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာမလိုက်နိုင်မည်ကို မိဘအချို့ စိုးရိမ? - Yangon Media Group
ကျောင်းသင်ရိုးသစ်ပေါ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာမလိုက်နိုင်မည်ကို မိဘအချို့ စိုးရိမ?
မကွေး ဇွန်လ ၃
၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့် GRADE3နှင့် အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် GRADE6တို့ကို သင်ရိုးသစ်များဖြင့် သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းသင်ရိုးသစ်အပေါ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာမလိုက်နိုင်မည်ကို ကျောင်းသားမိဘအချို့ စိုးရိမ်ပူ ပန်မှုများရှိနေကြောင်း ကျောင်းသား မိဘများထံမှသိရသည်။ ”မိဘတွေအနေနဲ့က ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပါ။ ကလေး တွေ စာတတ်မြောက်မှုကတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေသင်ကြားမှု အ ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သင်ရိုးအသစ် ပေါ်မှာ စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ ကျောင်း သူ၊ ကျောင်းသားတွေ စာလိုက်နိုင် ပါ့မလားဆိုပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာ တွေကလည်း အဆင့်မြင့်လာတယ်။ ဘာသာရပ်တွေကလည်း တိုးလာတဲ့အတွက် သင်ရိုးသစ်အပေါ် ကျောင်းသားတွေ စာလိုက်နိုင်ပါ့မ လားဆိုတာတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်” ဟု မကွေးမြို့မှ ကျောင်းသားမိခင် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ပြောကြား သည်။
ကျောင်းသင်ရိုးသစ်တွင် ယခင်ကကဲ့သို့ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သချာင်္၊ သမိုင်းနှင့် ပထဝီသာမက လူမှုရေး၊ ပန်းချီ၊ ဂီတစသည့် ဘာသာရပ်များ ပါ ပါရှိသဖြင့် သင်ရိုးသစ်တွင် ယခင်ကထက် ဘာသာရပ်များ ပိုတိုးလာ ကြောင်း သိရသည်။ ယခုသင်ကြားမည့်သင်ရိုး သစ်စနစ်မှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ ဝါသနာပါရာ ရွေးချယ်နိုင်မည့်သင်ကြားနည်းများပါဝင်သည့်အတွက် သင်ရိုးသစ်စနစ်က ကောင်းကြောင်းအချို့ကျောင်းသားမိဘများက ပြောကြားသည်။
”သင်ရိုးသစ်က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝါ သနာပါတာကို ထူးထူးချွန်ချွန် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ရိုးသစ်က ကောင်းပါတယ်”ဟု ကျောင်းသူမိခင်ဒေါ်အေးသီတာက ပြောသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဧပြီလက ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ပေါင်း ၇၂ဝဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် ငါးနှစ်ပြည့်ပြီး ကျောင်း နေမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ ၅ဝဝဝဝ ကျော်ရှိကာ KG မပါ မူလတန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃ဝဝဝဝဝ ကျော်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်ဒဏ်မစေ့မီ ခံဝန်ဖြင့် လွှတ်ပေးခြင်း စနစ် ကျင့်သုံးရန် စီစဉ်နေ
ကျောင်းစဖွင့်သည့်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၇၄၈ ကျောင်း၌ ကျောင်းသားကျောင်းသူ
မြိတ်မြို့ရှိ ကန်ဖျား ကုန်စိမ်းဈေးဆိုင်ခန်းများ အသစ်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကုန်စိမ်းဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဈေးရောင်းချသူများ သတင်းစာရှင်းလင်း
ယာယီနည်းပြ ဆိုလာရီ ကို ရီးရဲလ် အမြဲတမ်း နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်
တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် သပ်လျှိုသွေးခွဲေ?
တရုတ်နိုင်ငံသို့ မြန်မာ့ဆန် တင်ပို့ရန် ကုမ္ပဏီ ၄၂ ခုမှ ဆန်စက် ၇၉ စက်ကို ရွေးချယ်
တီဗွီချန်နယ်ပြဿနာ သားအဖ စကားများရာမှ ဖခင်ဖြစ်သူက သားကို ဓားဖြင့်ခုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ?